Hitches - Noti Caballos | Soavaly Noti
Ny hook dia zavakanto mihoatra ny fifehezana. Midika izany fa sarotra ny manatanteraka ny fitondrana ny sarety soavaly. Noho izany, tsy maintsy dinihintsika ny safidy maro manodidina ity fampiharana ity.
Ao amin'ity habaka ity no hahitanao izay ilainao rehetra mba hankafizanao azy tanteraka ny hoho sy ny fahalehibiazana asehon'ny soavaly aminy. Momba izany fomba fitondrana fiara amin'ny fomba sy kanto. Ka na inona na inona toro-hevitra sy hevitra dia mety hahasoa anao mba hankafizanao tanteraka ity fomba fiara ity.
Io fomba rehetra io Ahitana ho fanampin'ny farango ny haingo ny biby sy ny fikarakaran'izy ireo manokana. Tsy azontsika hadinoina fa zavaboary velona izy ireo ary tokony hikarakara azy ireo isika mba hisehoany isan'andro.
Ahoana ny fampiofanana ny soavaly mandihy?
Mandritra ny fety sy ny hetsika soavaly dia tsy azo ihodivirana ny fijanonana hijerena ireo soavaly mandihy. Ny fahatokisany azy ireo ...
Inona no atao hoe gallops?
Izy ireo no napetraka amin'ny lalàna mifehy ny fanatanjahantena mitaingina soavaly mifototra amin'ny fahalalana sy ny fiofanana ...
Fampiasana snooze sy karazany
Ny fiasan'ny halter dia ny mitarika ny soavaly amin'ny alàlan'ny fikirakirana ny kitrotro izay tanterahiny ...